जुम्ल्याहाको सुपरबाइक ब्लगिङ - साइन्स एण्ड टेक्नो - साप्ताहिक
रुपेन्द्र, लपेन्द्र जुम्ल्याहा थापा दाजुभाइ हुन् । दुबईको चर्को गर्मीमा उनीहरू सुपरबाइकसम्बन्धी भिडियो निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । काम पनि उनीहरूको जुम्ल्याहा नै छ । त्यसैले त एक जनाले भिडियो खिच्छन् भने अर्कोले भिडियोका लागि आवश्यक सामग्री तयार पार्छन् ।
उनीहरू बिमोटो भ्लग्स नामक युट्युब च्यानलमा हिन्दी मिश्रित नेपाली लवज तथा अंग्रेजी भाषामा विभिन्न जानकारीसहित विशेष गरी दुबईमा भएका विभिन्न बाइकको भिडियो अपलोड गर्छन् । बीमोटो भ्लग्समा बीको अर्थ ब्रदर्स हो । जुम्ल्याहा दाजुभाइले शुरुवात गरेको भ्लग्स अर्थात भिडियो च्यानल भएकाले यसको नाम बीमोटो भ्लग्स राखिएको हो । उनीहरूको च्यानल हाल बाइक क्रेजी युवाहरूबीच लोकप्रिय छ । करिब एक वर्ष पहिले उनीहरूले उक्त ब्लग प्रारम्भ गरेका हुन् ।
रुपेन्द्र र लपेन्द्र लमजुङको सुन्दर बजारका स्थायी बासिन्दा हुन् । यद्यपि उनीहरू लमजुङ बसेनन् । उनीहरू बुवाको जागिरका क्रममा बुवासँगै भारतमै हुर्किए । सन् २०१० मा बुवा रिटायर्ड भएपछि स्थायी बसोबासका लागि उनीहरू लमजुङ आए । अहिले बुवा–आमा यतै भए पनि यी जुम्ल्याहा दाजुभाइ भने दुबईमा छन् । उनीहरू नेपाल धेरै बस्न पाएनन् । दिल्ली युनिभर्सिटीबाट एमबीए गरे पछि उनीहरूले वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रयास गरे ।
भाइ लपेन्द्र दुबईको प्रतिष्ठित कम्पनी अल फुत्तिमको मानव संसाधन विभागमा काम गर्छन् भने दाइ रुपेन्द्र युरोपकै प्रतिष्ठित मानिने वायर इन्जिनियरिङको रिक्रुटमेन्ट स्पेसलिस्ट हुन् । शुक्रबार र शनिबार बिदा हुने भएकाले त्यही समयलाई उनीहरूले ब्लग र भिडियोग्राफीका लागि छुट्याएका छन् । उनीहरू शुक्रबार सुटिङ गरेर शनिबार सम्पादन गरी आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्छन् । पहिलो पटक सिंगापुरमा सामान्य अफिस क्लर्कका रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेका उनीहरू हाल यो अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् ।
रुपेन्द्र साप्ताहिकसँगको कुराकानीमा भन्छन्, ‘बुवाको पैसामा होइन, आफैंले केही गरौं भन्ने सोच थियो । त्यो सोचले अहिले सार्थकता पाएको छ ।’ स्कुल कलेज पढ्दादेखि नै उनी बाइक र अन्य सवारी साधनका क्रेजी थिए । त्यसैले उनी यसका लागि बुवासँग पनि झगडा गरिरहन्थे । उनको पहिलो बाइक पल्सर १५० थियो, जुन ५ वर्षजति चलाए । रुपेन्द्रमा बाइक र इन्धनसँग खेल्ने सौख नै थियो । घरमा उनी र उनको भाइको छुट्टै कोठा थियो र उनीहरू त्यो कोठालाई बाइकका तस्बिरले सजाउँथे । उनीहरू आफ्नो कोठाबाहेक अन्य स्थानमा पनि यसरी नै बाइकका तस्बिर सजाउन रुचाउँथे ।
रुपेन्द्र आफ्नो पहिलो बाइक पल्सर तीव्र गतिमा कुदाउने देखि लिएर स्टन्ट समेत गर्थे । उनी कामको सिलसिलामा पहिलो पटक सिंगापुर गए । सिंगापुरमा पनि उनले सुपरबाइक राइडरहरूसँग संगत गरे, उनीहरूसँग आइडिया लिइरहे ।
थापा विभिन्न अनलाइन सर्च गरिरहन्थे । यसरी सर्च गर्दा र विभिन्न कार्यका लागि आवेदन दिँदादिँदै उनको भाइलाई दुबईबाट कामका लागि अफर आयो । भाइ लपेन्द्र पहिलो पटक दुबई गए । पछि दाइ रुपेन्द्रले पनि दुबईमै काम पाए । अहिले उनीहरूले त्यहाँ काम गर्न थालेको पनि ६ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।
नेपाल जस्तो दुबईका सबै स्थानमा फोटोग्राफी वा भिडियोग्राफी गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि विभिन्न निकायबाट स्वीकृती लिनुपर्छ । तस्बिर वा भिडियो लिँदा अन्य कसैको तस्बिर त्यसमा आयो भने उनीहरूले मुद्दासमेत हाल्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न निकै गार्‍हो हुन्छ । रुपेन्द्र भन्छन्, ‘यो अवस्थामा फोटो वा भिडियो सम्पादन गर्न समेत निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना धेरै पटक गर्नुपरेको छ ।’
आफूले जानेको आइडिया अरुलाई सेयर गर्न जसलाई पनि आनन्द आउँछ, उनीहरूले त्यही आनन्द लिइरहेका छन् । ब्लग र युट्युब सुरुवात गर्ने उनको रहर भने पछि मात्र पलाएको हो । यसमा पनि अर्को छुट्टै प्रसंग जोडिएको छ । उनीसँग चिनजानको एक भाइले एक दिन उनको क्यामेरा मागेका थिए । उनलाई फोटो तथा भिडियो खिच्न सिकाइदिए पछि तिनै भाइले उनलाई ब्लग वा युट्युब बनाउन प्रेरित गरे । कुराकानीकै क्रममा यी दाजुभाइलाई आइडिया फुर्‍यो । दुबईका अधिकांश कार्य अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित हुन्छन् । बजारमा उपलब्ध हुने अधिकांश सुपर कार तथा सुपर बाइक दुबईमै लन्च हुन्छन् । त्यसो भए किन ब्लगिङ नगर्ने ? अनि सुरु भयो ब्लग । त्यसपछि उनीहरूले आफूले किनेका सामानहरूको रिभ्यु पनि दिन थाले ।
भाइ लपेन्द्र जहिले पनि स्क्रिनको अगाडि र रुपेन्द्र स्क्रिनको पछाडि । यसलाई उनीहरू दुई भाइको एउटा ग्रुप मान्न सकिन्छ । भिडियोका लागि आवश्यक सिन, ब्याकग्राउन्ड, साउन्ड क्वालिटी, भिडियो क्वालिटी आदि चेक गर्ने कार्य रुपेन्द्रको हुन्छ । स्क्रिन अगाडि लपेन्द्र देखिन्छन् र उनी त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्छन् ।
यसबीच उनीहरूसँग सुपरबाइक राइडरहरूको एक समूहले सम्पर्क गर्‍यो । दुबईमा करिब ३ सय देखि ४ सय जना राइडरले समूह बनाएका हुन्छन् । अफरोड, अनरोड आदिका लागि फरक फरक ग्रुप हुन्छन् । एक पटक रफ राइडर नामक सुपरबाइक राइडरहरूको ग्रुपले उनीहरूसँग ब्लग र भिडियो बनाउनुका साथै अन्य विभिन्न कामका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्‍यो । यो उनीहरूका लागि एउटा अवसर थियो । उनीहरूले नि:शुल्क रूपमा उक्त समूहको सदस्यता प्राप्त गरे । उनीहरूको ज्ञानको भण्डार पनि बढ्दै गयो । रुपेन्द्र भन्छन्, ‘बाइकको सीसी, इन्जिन आदिका बारेमा जानकारी बढ्दै गयो । बाइक कुन टाइपका र कति प्रकारका हुन्छन् ? बाइकका बारेमा धेरै कुरा थाहा भयो । हामीलाई पनि धेरैले चिन्न थाले ।’
युएईमा सक्रिय ग्रुप मध्ये एक लिबर्टी राइडर्सले पनि उनीहरूसँग सम्पर्क गर्‍यो र उनीहरू त्यसको पनि सदस्य भए । त्यसपछि उनीहरूको युट्युब च्यानलका फलोअर्स र सब्स्क्राइबर समेत बढ्दै गए । उनीहरूले हाल ६ सय सीसीभन्दा माथिका बाइकको ब्लगिङ गर्छन् । रुपेन्द्र भन्छन्, ‘नेपालमा पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यसका लागि हाई क्लासको बाइक, हाई क्वालिटी भिडियो र हाई साउन्ड क्वालिटी चाहिन्छ । नेपाल आएका बेला समय निकालेर गर्न सकिन्छ ।’
अमेरिकामा आधारित पुरानो कार अक्सन कम्पनी कोपार्टले उनीहरूलाई फोटोग्राफीका लागि अनुबन्ध गर्नु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आफ्नो वेबसाइटको पहिलो पेजमा कोपार्ट कम्पनीले उनीहरूकै फोटोग्राफी प्रयोग गरेको छ ।
आफूहरूले पैसा कमाउन भन्दा पनि युवाहरूलाई सुपरबाइकका बारेमा प्रेरणा र ज्ञान दिन ब्लगको प्रयोग गरेको रुपेन्द्र बताउँछन् । कतिपय राइडरले चाहेर पनि सुपरबाइक चलाउन पाएका हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरूले यसबाट ज्ञान लिन सक्छन् । अनरोड, अफरोड राइड गर्न चाहने भर्खरका युवाहरूले यसबाट प्रेरणा लिन सक्छन्, आइडिया लिन सक्छन् । यसैका लागि ब्लग प्रारम्भ गरेको थापा दाजुभाइको भनाइ छ ।
उनीहरूले यसका लागि धेरै समय खर्चिएका छन् र लामै संघर्ष गरेका छन् । दुबईको ४५ डिग्रीको गर्मीमा भिडियो खिच्नु आफैंमा दुस्साहस मान्न सकिन्छ । हिन्दी लबज मिसिएको नेपाली बोल्दै थापा भन्छन्, ‘यो कार्य सजिलो त होइन, धेरै अप्ठ्यारो छ ।’
जिन्दगीमा कुनै पनि कुरा त्यति सहज हुँदैन भन्ने थापाको मान्यता छ । आफ्नो उक्त ‘ड्रिम’ पुरा हुने उनले कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । ‘ब्लगिङ गरिएला र यति धेरै मानिसले चिन्लान् भनेर सोचिएकै थिएन । आफूमा रुचि जागे पछि कसैले हेरोस् वा नहेरोस्, ब्लग बनाउँदै गयौं ।’ रुपेन्द्र भन्छन्, ‘रुचि जागेपछि केही गर्न हिम्मत आउने र त्यही हिम्मतले अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने रहेछ । हिम्मतका साथ एकोहोरो रूपमा एउटा कार्यमा लागे उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने रहेछ । यही कुरा म आफ्ना फलोअर्सलाई भन्न चाहन्छु ।’